Njirimara, mmalite na ịmata ihe nke Milky Way | Netwọk Mgbasa Ozi
A na-akpọ ụyọkọ kpakpando nke anyị bi na ya Milky Way. O doro anya na ị maraworị nke ahụ. Ma olee ihe ị maara banyere ụyọkọ kpakpando a anyị bi na ya? Enwere ọtụtụ njirimara, ịmata ihe na nkuku nke mere Milky Way ụyọkọ kpakpando pụrụ iche. Ọ bụ ebe obibi anyị dị n’eluigwe ka ihe niile si dị Usoro anyanwụ Na mbara ala niile anyị maara Galayọkọ kpakpando ndị anyị bi na ya jupụtara na kpakpando, supernovae, nebulae, ume na ọchịchịrị. Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ihe na ọbụna ndị ọkà mmụta sayensị ka bụ ihe omimi.
Anyị ga-agwa gị ọtụtụ ihe banyere Milky Way, site na njirimara ya ruo na ịmata ihe omimi na ihe omimi.
1 Profaịlụ Milky Way
3 Onye chọtara ụzọ Milky Way?
Profaịlụ Milky Way
Ọ bụ maka ụyọkọ kpakpando nke mejupụtara ebe obibi anyị na mbara igwe. Ihe omuma ya bu ihe omuma nke nwere ogwe aka 4 di na disk. Ihe mejupụtara ya bụ ijeri kpakpando n’ụdị dị iche iche. Otu n’ime kpakpando ndị ahụ bụ Anyanwụ. Ọ bụ ekele nye Sun ka anyị dịrị wee nwee ndụ ka anyị siri mara ya.
Etiti ụyọkọ kpakpando dị anya site na mbara igwe nke afọ 26.000. Amabeghị nke ọma ma enwere ike karịa, mana amata na opekata mpe otu nnukwu oghere dị n'etiti Milky Way. Nwa oghere ghọrọ etiti nke ụyọkọ kpakpando anyị ma kpọọ ya Sagittarius A.
Xyyọkọ kpakpando anyị malitere ihe dịka 13.000 nde afọ gara aga ma bụrụ akụkụ nke otu ụyọkọ kpakpando 50 a maara dị ka Mpaghara Mpaghara. Xyyọkọ kpakpando ndị agbata obi anyị, nke a na-akpọ Andromeda, bụkwa akụkụ nke otu obere ụyọkọ kpakpando ndị ọzọ, gụnyere Cloudgwé ojii Magellanic. Ọ ka bụ ọkwa nke mmadụ mere. Otu ụdị nke, ọ bụrụ na ị nyochaa gburugburu ụwa dum na mgbatị ya, abụghị ihe ọ bụla.
Otu Mpaghara ahụ a kpọtụrụ aha n'elu bụ akụkụ nke nnukwu ụyọkọ ụyọkọ kpakpando buru ibu. Ọ na-akpọ Virgo supercluster. A na - akpọ aha ụyọkọ kpakpando anyị site n’ìhè ìhè anyị nwere ike ịhụ kpakpando na igwe ojii gas nke na - agbasa n’elu mbara igwe anyị site na ụwa. Ọ bụ ezie na ụwa dị n’ime Milky Way, anyị agaghị enwe ike nghọta zuru oke banyere ọdịdị ụyọkọ kpakpando dị ka ụfọdụ sistemụ ndị dị n’elu ụwa nwere ike.
Otutu ụyọkọ kpakpando a na-ezobe ya site na uzuzu uzuzu. Uzuzu a anaghị ekwe ka telescopes anya anya na-elekwasị anya nke ọma ma chọpụta ihe dị. Anyị nwere ike ikpebi nhazi ahụ site na iji telescopes na ebili redio ma ọ bụ infrared. Agbanyeghị, anyị enweghị ike ịmata nke ọma ihe dị na mpaghara ebe a na-ahụ uzuzu uzuzu. Anyị nwere ike ịchọpụta naanị ụdị radieshon nke na-abanye n'ọchịchịrị.
Anyị ga-enyocha ntakịrị njirimara ndị Milky Way. Ihe mbụ anyị ga-enyocha bụ akụkụ. Ọ dị ka ogwe osisi na-egbochi ma nwee dayameta nke afọ 100.000-180.000. Dị ka e kwuru na mbụ, ebe etiti ụyọkọ kpakpando bụ ihe dị ka afọ 26.000. Ebe a dị anya bụ ihe mmadụ agaghị enwe ike iji ndụ na teknụzụ anyị nwere taa ga njem. Afọ e guzobere na-eme atụmatụ na 13.600 ijeri afọ, banyere 400 nde afọ mgbe Ọdịda nnukwu.
Ọnụọgụ nke kpakpando ndị ụyọkọ kpakpando a nwere siri ike ịgụta ọnụ. Anyị enweghị ike ịgụta kpakpando niile dị na ha ọnụ, ebe ọ bụ na ọ baghị uru ịmata nke bụ́ eziokwu. E nwere ihe ruru ijeri kpakpando 400.000 na Milky Way naanị. Otu ihe ịmata ihe ụyọkọ kpakpando a nwere bụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ dị mbadamba. Ndị na-arụ ụka na ụwa dị larịị ga-adị mpako na nke a dịkwa oke. Ma ọ bụ na ụyọkọ kpakpando dị 100.000 afọ ìhè n'obosara ma ọ bụ naanị 1.000 ìhè afọ.
Ọ dị ka a ga - asị na ọ bụ diski pịrị apị ma gbagọọ agbagọ ebe mbara ala dị na gas na uzuzu gbagọrọ agbagọ. Ihe dika nke a bu sistemu nke igwe otu mbara ala na uzuzu ya na Anyanwu hiwere ebe elekere iri-abuo na iri isii site na etiti igwe kpakpando.
Onye chọtara ụzọ Milky Way?
O siri ike ịmata onye chọtara Milky Way. Ọ maara na Galileo Galilei bụ onye mbụ matara ịdị adị nke ụyọkọ nke ìhè na kpakpando anyị dịka kpakpando n'otu n'otu n'afọ 1610. Nke a bụ nnwale mbụ mbụ malitere mgbe onye na-enyocha mbara igwe tụrụ igwe teliskop mbụ ya n’eluigwe wee hụ na ihe mejupụtara ụyọkọ kpakpando anyị nke nwere ọtụtụ kpakpando a na-apụghị ịgụta ọnụ.
Laa azụ na 1920, Edwin hubble ọ bụ nke ahụ nyere ihe akaebe zuru oke iji mata na gburugburu gburugburu na mbara igwe bụ n'ezie ụyọkọ kpakpando dum. Eziokwu a nyere aka nke ukwuu ịghọta ezi ọdịdị na ọdịdị Milky Way. Nke a nyekwaara aka ịchọpụta otú ọ hà n'ezie na ịmara ọ̀tụ̀tụ̀ eluigwe na ala anyị nọ n'ime ya.
Anyị ejighịkwa n'aka otu kpakpando ole dị Milky Way nwere, mana ọ naghị atọ ụtọ ịmara. Gụ ha bụ ọrụ agaghị ekwe omume. Ndị na-enyocha mbara igwe na-anwa ịchọta ụzọ kachasị mma iji mee ya. Agbanyeghị, teliskop nwere ike ịhụ naanị otu kpakpando karịa ndị ọzọ. Ọtụtụ kpakpando na-ezo n'azụ igwe ojii na ikuku na nke anyị kwuru na mbụ.
Otu n’ime ihe ndị ha ji amata ọnụọgụ kpakpando bụ ịchọpụta otú kpakpando ndị ahụ na-agba n’etiti ụyọkọ kpakpando. Nke a na-egosi ntakịrị ndọda na oke. Ekesa otu kpakpando nke ụyọkọ kpakpando site nha nke otu kpakpando, anyị ga-enweta azịza ya.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Milky Way na nkọwa ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Milky Way
Kedu ihe bụ moraines